Mpanamboatra Aprons - China Aprons Supplies & Factory
Ny felam-baravaramanidina manga eo amin'ny potika U369S119000AG
Marika CHECKEDOUT Item Code CU369S119000AG habe MISY SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef waist apron, apron miaraka am-paosy Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary ...
Ny felam-panala vovoka volom-bava volomparasy am-paosy U369S118000AG
Ny marika CHECKEDOUT Item Code CU369S118000AG habe MISY SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef waist apron, apron miaraka am-paosy Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary ...
Fonosana Waiter Brown Maotom-basy miaraka amin'ny paosy U369S117000AG
Marika CHECKEDOUT Item Code CU369S117000AG habe MISY SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef waist apron, apron miaraka am-paosy Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary ...
Marika CHECKEDOUT Item Code U332D4022T habe MISY SAIZAKA Ny teny fototra amin'ny chef apron, waiter denim apron, apro fohy vita amin'ny lamba vita amin'ny 20 /80 poly / cotton GSM.346g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, mahatohitra malemy ...
Marika CHECKEDOUT Item Code U332D3913T habe MISY SAIZAKA Ny teny fototra amin'ny chef apron, waiter denim apron, apro fohy vita amin'ny lamba vita amin'ny 20 /80 poly / cotton GSM.346g Fanjaonana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, mahatohitra malemy ...